HS:-Gudoomiyaha boqolka maalmood ee gobolka Hiiraan C/fatax Xasan Afrax oo dhawaan safaro kala duwan ku soo maray wadamo ay ka mid yahiin Masar, Ethiopia iyo Kenya ayaa isagu safarkaas ka dhigay mid ku saabsanaa siyaasada Hiiraan amaba halkaas u tagay dano reer Hiiraan iyo wax la mid ah.
Dabcan Hiiraan waa dhulweyn waxaana dalalkaas ka jooga jaaliyadaha ugu badan dhamaantoodna ma jirto hal jaaliyad oo soo dhaweysay kedib markii ay xaqiiqsadeen in ay gudoomiyaha iyo xaaskiisa oo uu dhawaan u magacaabay xoghayaha dhinaca siyaasada gobolka Hiiraan ay halkaas u tageen sidii ay u soo indho indheyn lahaayeen guri ay doonayeen iney ka iibsadaan magaalada Qaahira.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale mudadii uu joogay dalka Kenya halkaas kula kulmay shaqsiyaad aan reer Hiiraan aheyn isagoona loo soo dhiibay mashruuc ay dhaqaalo badan ku baxeyso lana doonayo in bulshada Hiiraan lagu marin habaabiyo oo iyagoona mowqifkooda cadeysan lagu jajuubayo kaasi oo ay dalaal ka tahay haweeneyda u dhaxday laakisne uu ka dhigtay xogheynta.
Waa sahlan tahay in mediyaha laga yiraahdo waxaa maanta ku soo laabtay magaalada Belet Weyne gduoomiyaha gobolka Hiiraan iyo wafti uu hogaaminayey iyo wax la mid ah.
Ma jirto wafti amaba masuuliyiin kale oo maamulka ka tirsan oo dalka Masar u raacay marka aduunyada loo aadayo shirar la doonayo in degaan amaba dal lagu hormariyo waxaa safarka hogaamiyaas ku wehliya qaar maamulka uu sheegto ka mid ah balse maadaama ay safaradiisu ahaayeen mid u gaar ah isaga iyo xaaskiisa waxaa bulshada Hiiraan looga dhigay kuwo ku saabsanaa sidii Hiiraan loo horumarin lahaa.
Laakinse marka safarkaas laga soo tago gudoomiye C/fatax waxuu dhawaan siyaasada Hiiraan uga bixi doonaa si lama filaan ah kedib markii ay maamulkiisa go,aan aan wali banaanka imaan ka qaateen inta badan masuuliyiinta maamulka.
Kama hordhaceyno shaqsiyaadkaas oo u badan rag qurbaha ka tagay dhawaana xilal looga magacaabay maamulkaas ujeedada ay go,aankan uga qaateen ayey ku macneeyeen labo arimood.
1-Waxey sheegeen in aysan Hiiraan u tagin iney dadkooda qiyaanaan amaba ku lug lahaadaan siyaasado taariikh madow ah oo mustaqbalkooda iyo sumcadooda wax u dhimeysa waxeyna badankood ka fikirayaan mustaqbalka fog, halka gudoomiyaha ay shaki ka muujiyeen inuu yahay nin saacadkasta qoladii la hadasha ay waxey doonto ka dhaadhicin karto qaarkoodna iney maamulka dhawaan ka baxayaan ayeyba cuqaasha Hiiraan si hoose ugu sheegeen Hiiraan. gudoomiye C/fataax oo ay u moodeen nin dhalinyaro ah kana qaangaaray siyaasada ayey sheegeen hadii uu kudhiirado amaba uu si waadax ah reer Hiiraan hortooda ugu cadeyn waayo siyaasadiisa kuwajahan Hiiraan inta uusan waqtiga kumeel gaarka ah oo ay ka harsan tahay 55 cisho ka dhamaan.
Dhalinyaradan iyo masuuliyiintaan ka mid ka ah maamulka 100-ka maalmood ee Hiiaan ka jira ayaa iyagu sheegay iney gudoomiyaha ka sugayaan.
A) Inuu shir jaraadi qabto si waadax ahne u cadeeyo mowqifkiisa hadii uu inta shirqabto dhihi waayo anigoo ah gudoomiyaha gobolka kaashanayana cidkasta oo reer Hiiraan ah waxaa Hiiraan ka dhici doonaa shirweyne ay reer Hiiraan aayahooda kaka tashan doonaan laguna casuumin siyaasiyiinta, qurbojoogta iyo aqoonyahanada reer Hiiraan lana cadeyn qaabka amaanka loo sugayo waxey dhaheen inta ay goori goor tahay ayaan iska casili doonaan masuuliyada magac u yaalka ah ee aan bulshada waxbo loogu qabaneyn.
B) Sidoo kale hadii uu gudoomiyaha ogolaan waayo amaba u ololeyn waayo in ay Hiiraan doorasho madaxtinimo ka dhacdo isaguna uusan dhihin waxaan ahey musharax waxaan ka raadsanayaa halkaas calafkeyga waxey sheegeen inuusan aheyn nin doonayey inuu siyaasada heer ka gaaro ee uu ahaa sida ay dad badan aaminsan yahiin nin hanti abuurasho iyo dhiiga dadka Hiiraan ku gaarayey mansab dhaqaale.
Hadaan shaqsiyaadkaan oo intii uu ku maqnaa dibada ka shirayey siyaasadiisa aanu banaanka soo dhigno magacyadooda hal mar ayuu waagu ku baryayaa gudoomiya C/fatax.
Sida aan taariikhda ku heyno Hiiraan sooma marin hogaamiye yiraahdo oo doorasho in la qabto ayaan diyaar u ahey iyo shirweyne ay reer Hiiraan aayahooda kaka tashanayaan hala iclaamiyo 23 kii sano ee ina dhaaftay waxaa jiray oo kaliya shaqsiyaad laga hagayey meelo Hiiraan ka baxsan oo iyagoon dadkooda la tashan ku dhaqaaqi jiray waxey doonaan kedibna laga dhaxli jiray siyaasado qariban iyo fowdo.
Bal ka waran adigoo dhawr iyo 30 jir ah oo gudoomiyaha Hiiraan meesha uu jooga jooga aadna u dareensan aduunyada aanu maanta ku nool nahay wacyiga lagu jiro iyo siyaasadaha maanta dalkeenii hooyo ka jira ee u badan fowdada nin qeyrkaa ah oo aan kaa dhul fiicneyn, kaa dadnimo fiicneyn kaana dhaqaalo badaneyn siyaasad uu kuu soo dhibay maku maamuli laheyd dadkaada?
Hadaba saacadaha soo socda naga filo shir qarsoodi ah oo Kenya ku dhaxmaray Gudoomiye C/fatax oo aysan xitaa jaaliyada Hiiraan ee Kenya ka warqabin iyo shaqsiyaad aan reer Hiiraan aheyn,waayo siyaasiga waxuu dadkiisa ixtiraamaa amaba meeshii uu tago lagu soo dhaweeyaa marka uu qaab wanaagsan ku yimaado laakinse marka uu sida gudoomiyaha gobolka Hiiraan siyaasada ku soo galay wado qaldan from Burcad Badeed, Libiya ilaa Sheikh Shariif wey adkaaneysaa in u qofkaas ku dhirado wax bulshada anfacayo waayo wanaaga dhan dhib ayey ku tahay dadka noocaas ah.
Hadaba xubnaha siyaasad ahaa ka soo horjeesan doona gudoomiye C/fatax ee maamulkisa ka mid ah dhawaan naga filo inta aysan iyagu ku dhawaaqin arintaasne waxaan ka soo qaadi doonaa wareysiyo kala duwan gudoomiye C/fatax iyo xogheyntiisa cusubna waxey si lama filaan ah uga bixi doonaa siyaasada Hiiraan.
· admin on August 14 2014 15:42:16 · 0 Comments · 2293 Reads ·
14,934,460 unique visits